NAPTIP NA-ANAPUTA MMADU 468 NDI E MERURU AHU
Previous BUHARI NA KWADO NKWADO N’AKPO MAKA ICC
Next OSHIOMOLE KWURU NA ORTOM AHAPUBELE APC
AHU IKE BU AKU, AKUKO UWA, Hot News, IHE N'EME N'OBODO, Local News
President Muhammadu Buhari akpọkuwo obodo iri na abụọ na otu nke Rome na iwu nke ikpe ikpe na-ahụ maka ikpe ikpe nke ikpe ụlọikpe na-akwado ikpe na-ezighị ezi nke nrụrụ aka na ego na-ezighị ezi site n’aka ndị isi obodo.
Onyeisi oche ahụ kpọrọ oku na Hague na okwu ya iji mee ememe ncheta nke afọ 20 nke ụkpụrụ Rome nke ICC.
Ụlọikpe Criminal International malitere iwu afọ iri abụọ gara aga dị ka ụlọikpe zuru ụwa ọnụ, bụ nke Nuremberg na-anwale nke ndị omempụ agha nke Agha Ụwa nke Abụọ, iji mee ka ndị mmadụ mara maka mpụ megide ụmụ mmadụ, mpụ agha, mpụ nke mgbukpọ na mwakpo.
Deputy Secretary General, Amina Mohammed, jara Naijiria mma maka ịtọ ntọala ụwa nke mbụ zuru oke nke ụwa, akwụkwọ ntinye nnu 10.69, nke a makwaara dịka nsụgharị ihu igwe.
Mohammed, bụ onye nyere aka mma mgbe a malitere akwụkwọ na isi ụlọ ọrụ UN dị na New York, kwuru na Nigeria bụ mba mbụ Afrika nke ga-eweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na onye nwe ụwa nke anọ na-acha akwụkwọ ndụ.
FAYEMI: MMERI M NWERE MAKA ODINIHU NIGERIA
Mkpịsị ọkụ na-akwụ ụgwọ ala ego na-akwụ ụgwọ iji kwado ụgwọ ọrụ nwere mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi.
Gọọmentị Federal kwuru na ọgbọ eletrik sitere na mmiri nwere ike iru 19,000 megawatts ozugbo ha na-arụ ọrụ zuru ezu.
Minista sayensị na teknụzụ, Mr Ogbonnaya Onu, bụ onye kwuru nke a, kwuru na Nigeria choro ka ọ dịkarịa ala 160,000 000 eletrik eletrik ma ugbu a na-emepụta naanị 7,000,000 megawatts.
National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP) na-ekwu na ọ napụtara ndị natara mmadụ 468 nke ịzụ ahịa ụmụ mmadụ n’ime ọnwa isii gara aga.
Iwu NAPTIP na Benin mpaghara kwuru na ihe dị ka mmadụ iri atọ a na-enyo enyo na ndị na-azụ ahịa mmadụ; mmadụ abụọ mara ikpe, ebe ọ bụ na ikpe 33 ka nọ n’ụlọikpe dị iche iche n’oge ahụ.
Minister of Transportation, Rotimi Amaechi, anatawo onyinye umuaka Blueprint Newspaper maka onyinye ya maka ịkọ ụgbọ okporo ígwè na iwu nke usoro monorail mbụ na Sub-Sahara Africa.
Gov. Ibrahim Dankwambo nke Gombe, Central Bank of Nigeria (CBN) Gọvanọ, Godwin Emefiele na Senator Shehu Sani na-anọchi anya Kaduna Central natara onyinye na Blueprint Impact Series / Awards emere na Abuja
Buhari DRUG HEALTH hot iheneme IHENEME NOBODO ihenemenobodo Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbido tv isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV LATEST muhammadu NAPTIP new news nobodo POLITICS post posts rescue TRAFFICKING update WORLD